Kaadị SIM vs. Pocket Wifi
Oge Japan ugbu a
Ihe Omume Kwa Afọ
Ihu igwe & Weather
Ala Ọma Jijiji & Volcanos
Saịtị ndị metụtara Japan
Ndụ na Ọdịnala
Mmekọrịta na Nature
Nature kuziri anyi "Mujo"
Eyi n'oge oyi na Japan
Iyi Oyi na Hokkaido
Oge Ugbo na Japan
Iyi N'oge okpomọkụ na Japan
Mgbụsị akwụkwọ Wear na Japan
Mmekọrịta na ndị mmadụ
Ile Ọbịa nke Japan
Omume na Omenala
Ndị otu egwuregwu Japan
Ezinaụlọ ndị Japan
Foto: Agbamakwụkwọ ndị Japan
Foto: Ọdịnala Bamboo
Foto: Ihe osise ọkụ na Japan
Foto: igbọ ala Kei
Tiketi na Njem
Oge mgbụsị akwụkwọ
Anụmanụ na Azụ
Pleslọ arụsị na rinlọ arụsị
Itineraries kacha mma
Ugwu Mt. Fuji
Ala Tohoku Ala
Onye isi obodo Saitama
Onye isi ala Nagano
Onye isi ala Nigata
Toyama onye isi
Onye isi Wakayama
Onye isi obodo Shimane
Foto: Oke Oke Osimiri
Onye isi oche Kagawa
Hotel na Ryokan
Shinkansen (ụgbọ oloko)
Chgbọ elu Ọhụụ Chitose
Itagbọ elu Narita
Gbọ elu Haneda
Kangbọ elu Kansai
Oge Ahịrị, Ndụ na Ọdịbendị
Pịa na obodo, ngalaba, ma ọ bụ mpaghara iji kirie edemede ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike pịa map a, biko pịa bọtịnụ dị n'okpuru wee họrọ obodo, mpaghara ma ọ bụ mpaghara ịchọrọ ịhụ.
Mpaghara na ngalaba
Foto: Kiyomizudera Temple na Kyoto
Ebe nlegharị anya kacha ewu ewu na Kyoto bụ Fushimi Inari Shrine Shrine, Temple Kinkakuji na Temple Kiyomizudera. Ụlọ nsọ Kiyomizudera dị na mkpọda ugwu dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke obodo Kyoto, na echiche sitere na nnukwu ọnụ ụlọ, nke dị mita 18 n'ịdị elu, dị egwu. Ka anyị gaa njem nlegharị anya na Temple Kiyomizudera! Foto nke ụlọ nsọ Kiyomizudera dị na Kyoto Kiyomizudera Temple na Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temple dị na Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temple dị na Kyoto na Kyoto = Ụlọ nsọ Shutterstock Kiyomizudera dị na Kyoto = Shutterstock Map nke Ụlọ Nsọ Kiyomizudera [map address="Kiyomizudera Temple" width="100%" height="353px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARYAR"F8obRvaO3PEN4et class="displight" border-map dp-map-centered" zoom="12" ịdọrọ = "ezi" njikwa = "eziokwu"] Enwere m ekele maka ịgụ akwụkwọ ruo ọgwụgwụ. laghachi na"Best of Kyoto"Njikọ ndị metụtara: Foto: Kodaiji Temple dị na Kyoto Foto: zenlọ Nanzenji dị na Kyoto Foto: Ime Anwansi nke urlọ Nsọ Rurikoin na Kyoto Foto: Agba ụbịa na flọ Tofukuji, Kyoto Foto: itlọ Daitokuji dị na Kyoto -towa nke Zen na mmekọrịta na Nature Kyoto ! 26 Ebe kacha mma: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji wdg. Foto: Eikando Zenrin-ji Temple-templelọ nsọ ahụ nwere agba mgbụsị akwụkwọ kacha mma Foto: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Foto: Kyoto ọdịnala na Foto Ezumike: Cherry okooko osisi na Kyoto Foto: Osimiri Kamogawa na Kyoto Foto: Oge mgbụsị akwụkwọ na Kyoto
Photos Nweta snow
Foto: Obodo kpuchie snow na Japan
Ọ ga-amasị m ịkọrọ gị ọmarịcha obodo ndị snoo na Japan. Ndị a bụ foto nke Shirakawa-go, Gokayama, Miyama na Ouchi-juku. Otu ụbọchị, ị ga-anụ ụtọ ụwa dị ọcha n'ime obodo ndị a! Foto nke obodo ndị snow kpuchiri ekpuchi Shirakawago (Gifu Prefecture) Shirakawago, Gifu Prefecture Shirakawago, Gifu Prefecture Shirakawago, Gifu Prefecture Map nke Shirakawago [adreesị maapụ = "Shirakawago" width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bs8Rwl" the ="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" ịdọrọ = "ezi" njikwa = "ezi"] Gokayama (Toyama Prefecture) Gokayama, Toyama Prefecture Gokayama, Toyama Prefecture Map nke Gokayama [maapụ adreesị = "Gokayama" obosara = "3%" elu = "4px" api = "AIzaSyDvB8bpqAqs_d100wlvYARF500obRvaO87PEN8" isiokwu = "discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom " draggable = "ezi" njikwa = "ezi"] Miyama (Kyoto Prefecture) Miyama, Kyoto Prefecture Miyama, Kyoto Prefecture Map of Miyama [map address="Miyama, Kyoto" width="8%" height="3px" api= "AIzaSyDvB4bpqAqs_d8wlvYARF100obRvaO500PEN87" isiokwu = "discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" ịdọrọ =" ezi" controls = "ezi"] Ouchi-juku (Fu) Kushima Prefecture) Ouchi-juku, Fukushima Prefecture Ouchi-juku, Fukushima Prefecture Map of Ouchi-juku [map address="Ouchijuku, Fukushima" width="8%" height="3px" api="AIzaSyDvB4bpqAqs_d8et" the class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="100" ịdọrọ = "ezi" controls="ezi"] Ihe ị ga-eyi mgbe ị na-eleta obodo ndị snow juru, enwere m ekele maka ịgụ akwụkwọ ruo ọgwụgwụ. Laghachi na "Ebe Snow" Ihe ndị metụtara: Foto: Foto: Fuji kpuchie na snow 500 Ebe Snow kacha mma na Japan: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo snow festival ... Foto: K-ụgbọ ala na Japan Foto: Sakura- Cherry okooko osisi na Foto ndị Japan: Miharu Takizakura - Osisi cherry kacha mma na Japan! Foto: San'in - Ala dị omimi ebe Japan oge ochie ka dị! Foto: Nara - Isi obodo Japan oge ochie Nabata na Japan! Nwee ọmarịcha foto 87! Foto: Oge anọ nke Kamikochi Foto: Odaiba na Tokyo Bay Foto: Foto Hakodate: Ise Jingu Shrine ...
Foto: Biei na Furano n'oge ọkọchị
Ebe ndị njem nlegharị anya kacha ewu ewu na Hokkaido n'oge ọkọchị bụ Biei na Furano. Ebe ndị a, nke dị n'etiti Hokkaido, nwere ala dị larịị. Okooko osisi ndị mara mma na-ama ifuru ebe ahụ. Ịhụ mgbanwe nke ọdịdị na mbara ala a ga-agwọta uche gị. Maka Biei na Furano, edeela m akụkọ ụfọdụ. Otú ọ dị, ọ ga-amasị m ịmebata ịma mma nke ahịhịa ahịhịa n'oge okpomọkụ, yabụ m ga-achikota njirimara foto ebe a. Biko rụtụ aka na akụkọ ndị a gbasara Biei na Furano. Ụwa mara mma n'oge okpomọkụ Ọwụwa anyanwụ na Biei, Hokkaido, Japan = Adobestock Okooko osisi mara mma ugbo mara mma na Biei, Hokkaido, japan = Shutterstock African Marigold, Salvia na-ama ifuru na ahịrị egwurugwu na ọmarịcha panoramic Flower Gardens Shikisai-no-oka na Hokkaido. , Japan = Shutterstock Lavendar, okooko osisi sage na-acha uhie uhie nke Ogige Ọwụwa Anyanwụ, Furano, Hokkaido, Japan = Shutterstock Otu nwanyị guzo na Lavender Field na Tomita Farm, Furano, Hokkaido, Japan = Shutterstock Echiche ndị ọzọ dị ukwuu na Biei na Furano Ugwu mara mma nke Biei- cho, Hokkaido = Adobe Stock Ken & Mary osisi, ebe ama ama na Biei-cho, Hokkaido Japan = Shutterstock Sunflower ifuru na Hokusei no Oka Tenbo Park na Hokkaido, Japan = Shutterstock blue ọdọ mmiri nke bieishirogane obodo = Shutterstock blue ọdọ mmiri nke bieishirogane obodo = AdobeStock Anyasị na mgbede Hokkaido. Biei Hokkaido, Japan = Shutterstock ọdịda anyanwụ na Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock mara mma ọdịda anyanwụ na Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock Maps Biei [adreesị map = "Biei, Hokkaido" width="100%" elu = "300px" api=" AizaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" isiokwu = "discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable = "ezi" controls = "ezi"] Furano [map adreesị = "Furano, Hokkaido" . ..
Foto: Geisha (Maiko & Geigi) na Gion, Kyoto
Japan ka nwere omenala "geisha". Geisha bụ ụmụ nwanyị na-eji egwu na egwu ndị Japan na-anabata ndị ọbịa ha nke ọma. Geisha dị nnọọ iche na nkwanye ùgwù "Oiran" nke dị n'oge Edo. Na Kyoto, a na-akpọ geisha "geigi". A na-akpọ onye nkuzi na-eto eto geisha "maiko". N'oge na-adịbeghị anya, ndị inyom na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ nwere ike ịghọ geisha. Na mbụ, m gbara ajụjụ ọnụ geisha ọtụtụ ugboro. Ha amụtala nnukwu ọgụgụ isi na omume siri ike ma bụrụkwa ndị ga-anọchi anya omenala ọdịnala bara uru. Na Kyoto, a na-eme mmemme n'oge opupu ihe ubi na ụbịa ebe ị nwere ike ile egwu egwu geisha. Geisha na-ekerekwa òkè na mmemme Gion na Julaị. Biko nwaa omenala geisha! Foto nke Gion Foto nke Gion = Foto Shutterstock nke Gion = Foto Shutterstock nke Gion = Foto Shutterstock nke Gion = Foto Shutterstock nke Gion = Foto Shutterstock nke Gion = Foto Shutterstock nke Gion = Shutterstock Foto nke Gion Gion [map address="Gion, Kyoto" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" isiokwu="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" mbugharị="12 " draggable = "ezigbo" njikwa = "ezi"] Enwere m ekele maka ịgụ akwụkwọ ruo ọgwụgwụ. laghachi na"Best of Kyoto" posts ndị metụtara: Foto: Foto: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Foto: Kyoto omenala na foto okpomọkụ: Ụlọ nsọ Kodaiji dị na Kyoto Foto: Cherry okooko osisi na Kyoto Foto: Ụlọ nsọ Kiyomizudera na Kyoto Foto: Osimiri Kamogawa na Kyoto Foto: Nanzenji Temple na Kyoto Foto : Ememme Jidai Matsuri na foto Kyoto: ọmarịcha ọkụ "Hanatouro" na Arashiyama, Foto Kyoto: ...
Foto: Kinkakuji vs Ginkakuji -Which kacha amasị gị?
Kedu nke kacha amasị gị, Kinkakuji ma ọ bụ Ginkakuji? Na ibe a, ka m webata foto ndị mara mma nke ụlọ arụsị abụọ a na-anọchi anya Kyoto. Maka ozi ndị ọzọ gbasara Kinkakuji na Ginkakuji, biko hụ akụkọ ndị dị n'okpuru. Foto nke ụlọ nsọ Kinkakuji na Ginkakuji Ginkakuji dị na Kyoto, Japan = Ụlọ nsọ Shutterstock Kinkakuji dị na Kyoto, Japan = Ụlọ nsọ Shutterstock Ginkakuji dị na Kyoto, Japan = Ụlọ nsọ Shutterstock Kinkakuji dị na Kyoto, Japan = Shutterstock Ginkakuji Temple Japan = Ụlọ nsọ Shutterstock Kinkakuji dị na Kyoto, Japan = Ụlọ nsọ Shutterstock Ginkakuji dị na Kyoto, Japan = Ụlọ nsọ AdobeStock Kinkakuji dị na Kyoto, Japan = Map Shutterstock nke Kinkakuji [adreesị map = "Kinkakuji" width="100%" elu = "300px" api= "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" isiokwu ="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" ịdọrọ = "ezi" njikwa = "ezi"] Map nke Ginkakuji [adreesị map = "Ginkakuji" obosara. ="100%" elu = "300px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" isiokwu ="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" ịdọrọ =" ezi" njikwa = "ezi" ] Enwere m ekele maka ịgụ akwụkwọ ruo ọgwụgwụ. laghachi na"Best of Kyoto"Njikọ posts: Foto: Kodaiji Temple dị na Kyoto Foto: :zọ ugwu ugwu akụkọ ihe mere eme na Kyoto -Sannei-zaka, Ninei-zaka, wdg Foto: The Jidai Matsuri Festival na Kyoto Foto: Osisi okooko osisi na Kyoto Foto: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Foto: Kifune, Kurama, Ohara n'oge oyi -Gagagharị gburugburu ugwu Kyoto Kyoto! 26 Ebe kacha mma: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji wdg. Foto: Nara - Isi obodo oge ochie nke Japan Foto: Geisha (Maiko & Geigi) na Gion, Foto Kyoto: Omenala Kyoto na Oge Oyiyo Foto: Obodo ndi snow kpuchitere na Japan Foto: Koyasan
Hakodate dị n'ebe ndịda Hokkaido na-ekpuchi snow site na Jenụwarị ruo March.Hakodate n'oge a mara mma n'ezie. Nri osikapa azụ azụ na ahịa a na-akpọ Asaichi bụkwa nke kacha mma. Ka anyị gaa njem mebere na Hakodate! Biko rụtụ aka n'isiokwu na-esonụ maka nkọwa. Foto nke abalị Hakodate site na Mt. Hakodate = Shutterstock Ebe oyi si n'Ugwu Hakodate = Shutterstock Mt. Hakodate hụrụ site na ọdụ ụgbọ mmiri Hakodate = Shutterstock Obodo Hakodate hụrụ site na mkpọda nke Motomachi = Shutterstock City tram na-agba ọsọ na Hakodate obodo = Shutterstock obodo Hakodate oyi Kanemori Aka Renga Soko in Hakodate = Shutterstock Hokodate Morning Market dị nso na Hakodate Station nri mmiri n'ahịa ụtụtụ Hakodate = Shutterstock mara mma nke ọma Goryokaku = Shutterstock mara mma nke ọma Goryokaku = Shutterstock Enwere ugwu Komagatake mara mma na ala ịta ahịhịa nke Hakodate You nwere ike ịnụ ụtọ ya. skiing na snowboarding na Onuma Park na ala ịta ahịhịa nke Hakodate = Shutterstock Map nke Hakodate [map address="Hokodate" width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" isiokwu = "dislight" -border-map dp-map-centered" zoom="8" ịdọrọ = "ezi" njikwa = "eziokwu"] Enwere m ekele maka ịgụ akwụkwọ nangwucha. Laghachi na "Kasị Mma nke Hakodate" posts ndị metụtara: Hakodate! 7 kacha mma nlegharị anya nlegharị anya na ihe a ga-eme Foto: Biei na Furano n'oge okpomọkụ Foto: Taushubetsu àkwà mmiri na Hokkaido Foto: Tomamu na Hokkaido Foto: Ịnyịnya na Hokkaido Foto: Ịnyịnya na Hokkaido Foto: Osisi ndị mara mma na Tokachi, Hokkaido Foto: Noboribetsu Onsen -Hokkaido's kasị ukwuu na-ekpo ọkụ mmiri ezumike Foto foto. Foto Yokohama: Foto Koyasan: Obodo ndị snow kpuchiri na Japan Foto: Mma Okinawa ...
Foto: Tadami Line na Fukushima Prefecture
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ echiche ime obodo ndị Japan mara mma site na ụgbọ oloko, ana m akwado JR Tadami Line na ọdịda anyanwụ Fukushima Prefecture. Ahịrị Tadami na-esi na Aizu-Wakamatsu, obodo oge ochie ebe ị nwere ike ịhụ omenala samurai nke Japan, site na ugwu. Foto nke Tadami Line JR Tadami Line dị na Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line dị na Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line na Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line na Fukushima Prefecture = Pixta JR Tadami Line na Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line na Fukushima Prefecture = Pixta JR Tadami Line na Fukushima Prefecture = Shutterstock Map nke Aizu-Wakamatsu [adreesị map = "Aizu-Wakamatsu" obosara = "100%" elu = "300px " api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" isiokwu = "discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="7" draggable = "eziokwu" controls = "eziokwu"] Enwere m ekele maka ịgụ akwụkwọ ruo ọgwụgwụ. . laghachi na"Best of Fukushima"Njikọ posts: Foto: Ouchijuku Village na Fukushima Prefecture Foto: Hanamiyama Park na Fukushima Prefecture Fukushima Prefecture! Ebe kacha mma na ihe ị ga-eme Foto: Miharu Takizakura -Otu cherry kacha mma na Japan! Foto: Ise Jingu Shrine na Mie Prefecture Foto: Foto Kanazawa dị na Ishikawa: Foto Motonosumi na Yamaguchi Foto: Gunkanjima Island na Nagasaki Mpaghara Foto: Togakushi Shrine na Nagano Prefecture Foto: Ndagwurugwu Biwako na Shiga Mpaghara Foto: Takachiho na Miyagaki Mpaghara Foto: Obodo ndị snow kpuchiri na Japan
Foto: Beppu (1) Ebe mmiri na-ekpo ọkụ mara mma na-enwu gbaa
Beppu, nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Kyushu, bụ ebe ezumike mmiri na-ekpo ọkụ kacha ukwuu na Japan. Mgbe ị gara na Beppu, mmiri na-ekpo ọkụ ga-ebu ụzọ eju gị anya. Mgbe ị na-ele anya na obodo Beppu site n'ugwu, dị ka ị na-ahụ na ibe a, uzuoku na-ebili n'ebe nile. Ha abụghị ọkụ ma ọlị. N'abalị, uzuoku ndị a na-enwu ma na-enwu nke ọma. Foto nke Beppu Map nke Beppu [map address="Beppu, Oita" width="100%" height="300px" api="AizaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" isiokwu="discreet" class="dp-light-border-map-map-map-map. n'etiti" mbugharị = "9" ịdọrọ = "ezigbo" njikwa = "ezi"] Enwere m ekele maka ịgụ akwụkwọ ruo ọgwụgwụ. Biko hụ foto ndị ọzọ. Laghachi na "Kachasị Mma nke Beppu" Banyere m Bon KUROSAWA M na-arụ ọrụ ogologo oge dị ka onye isi nchịkọta akụkọ maka Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) ma na-arụ ọrụ ugbu a dị ka onye edemede webụ nọọrọ onwe ya. Na NIKKEI, abụ m onye nchịkọta akụkọ mgbasa ozi na omenala ndị Japan. Ka m webata ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ na ihe na-atọ ụtọ gbasara Japan. Biko rụtụ aka na akụkọ a maka nkọwa ndị ọzọ. Ihe ndị metụtara: Foto: Beppu (4) Nwee obi ụtọ na mmiri ọkụ n'ụdị dị iche iche! Bepu! Nwee anụrị na ebe ezumike mmiri ọkụ kacha ukwuu na Japan! Foto: Beppu (3) Ka anyị gaa na Hells dị iche iche (Jigoku) Foto: Beppu (2) Mgbanwe mara mma nke oge anọ! : Hakone - Akwadoro mpaghara mmiri na-ekpo ọkụ dị nso na foto Tokyo: Oge oyi na Niseko Ski Resort na Hokkaido -Nwee obi ụtọ na snow ntụ ntụ! Foto: Kinosaki Onsen - Omenala na-ewu ewu na-ekpo ọkụ ...
Foto: The Miharu Takizakura -Meri udara kacha mma na Japan!
Ọ bụrụ na ị jụọ m nke bụ ifuru cherry kacha mma na Japan, a ga m asị na Miharu Takizakura dị na Fukushima Prefecture. Osisi Miharu Takizakura karịrị 1000 afọ. Osisi cherry a ka ndị obodo na-echekwa ma hụ ya n'anya kemgbe. Ka anyị gaa njem mebere ka anyị nwee ekele maka Miharu Takizakura! Foto nke Miharu Takizakura Miharu Takizakura dị na Fukushima Prefecture = Shutterstock Miharu Takizakura na Fukushima Prefecture = Shutterstock Miharu Takizakura na Fukushima Prefecture = Shutterstock Miharu Takizakura na Fukushima Prefecture = Shutterstock Miharu Takizakura dị na Fukushima Prefecture = Shutterstock Miharu Takizakura dị na Fukushima Prefecture = Shutterstock Miharu Takizakura dị na Fukushima Prefecture = Shutterstock Miharu Takizakura na Fukushima Prefecture = Shutterstock Map nke Mikuraharuharu "obosara = "100%" elu = "500px" api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" isiokwu = "discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" ịdọrọ =" ezi" njikwa = "ezigbo"] Enwere m ekele maka ịgụ akwụkwọ ruo ọgwụgwụ. laghachi na"Best of Fukushima" posts ndị metụtara: Foto: Foto: Hanamiyama Park na Fukushima Prefecture Photos: 11 Keywords to also enjoy Japanese Cherry Blossoms Photos: Obodo ndị snow kpuchiri na Japan Foto: Mt. Yoshino -30,000 cherry osisi oge ntoju na mmiri! Foto: Foto Koyasan: Ise Jingu Shrine na Mie Prefecture Foto: Kanazawa na mpaghara Ishikawa Foto: San'in -Ala omimi ebe Japan ochie ka dị!
Foto: Takachiho na mpaghara Miyagaki
Takachiho bụ ala dị omimi mara dị ka ebe obibi nke akụkọ ifo ndị Japan. Ọ dị na mpaghara ugwu Miyazaki Prefecture na ọwụwa anyanwụ Kyushu. Obodo ka na-ejigide ebe akụkọ ifo na egwu Kagura metụtara ha. Ọ bụkwa ama maka ọmarịcha oke osimiri nke igwe ojii n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ebe njem nlegharị anya kacha ewu ewu na obodo a bụ Takachiho Gorge. Ka anyị jiri ọtụtụ foto were njem mebere na Takachiho! Foto nke Takachiho Takachiho na mpaghara Miyagaki = Shutterstock Takachiho dị na Miyagaki Prefecture = ADobeStock Takachiho na mpaghara Miyagaki Prefecture na Miyagaki Prefecture Map nke Takachiho [map address="Takachiho, Miyazaki Prefecture" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" isiokwu="discreet" class="dp-order-dp-dp-light" -centered" zoom="9" ịdọrọ = "ezi" njikwa = "ezi"] Enwere m ekele maka ịgụ akwụkwọ ruo ọgwụgwụ. Laghachi na "Kachasị mma nke Miyazaki" Ihe ndị metụtara: Foto: Oze na Gunma Foto: Ndagwurugwu Biwako na Shiga Prefecture Foto: Kanazawa na Ishikawa Prefecture Photos: Hanamiyama Park na Fukushima Prefecture Photos: Ise Jingu Shrine in Mie Prefecture Photos: Gunkanjima Island na Nagasaki Foto ndị dị na mpaghara: Ụlọ nsọ Togakushi dị na Nagano Foto Foto: Motonosumi Shrine na Yamaguchi Prefecture Foto: Tadami Line na Fukushima Prefecture Foto: Shuri Castle na Okinawa Prefecture Foto: Matsue na Shimane Prefecture Foto: Hikone Castle na Shiga Prefecture
Ozi si onye nchịkọta akụkọ:
Daalụ maka ileta “Best of Japan”! Aha m bụ Bon Kurosawa na ebum n’uche m bụ inye ozi ndị bara uru nwere ndị ọbịa na ndị nwere mmasị na Japan. Isiokwu ndị a, foto na vidiyo a ga-enye gị ụtọ pụrụ iche nke Japan. Enwere m olileanya na site na “Best of Japan”Ị ga-enwe mmetụta nke ịbịaru Japan nso ma nwee echiche dị mma banyere ihe ị ga-atụ anya ya.
Nwee obi ụtọ na Japan na saịtị a!
A na-elele saịtị a site na kọmputa. Videosfọdụ vidiyo nwere ike ọ gaghị egwu site na ama gị. Agbanyeghị, site na ama ama ị nwere ike ị nweta ihe ederede na-enye gị ozi kachasị ọhụrụ na Japan. Enwere ike iji njikọ dị na mpụga nke weebụsaịtị a maka abamuru gị.
Enwere ọtụtụ saịtị na-ewebata Japan. Agbanyeghị saịtị a ka malitere amalite m aga n'ihu imelite ọdịnaya ya kwa oge.
Mgbe ị chọrọ ịmụ banyere Japan ma ọ bụ chọọ ihe na-atọ ụtọ ịgụ "Best of JapanBụ nhọrọ kasị mma!
Nchịkọta saịtị a
Kedu peeji nke ị ga-achọ inyocha Japan?
Ndụ ndị Japan! na-ebi ndụ kwekọrọ na okike na ndị mmadụ
Site ebe a, m ga-achọ ịme ka ị mata ndụ na ọdịnala ndị Japan. Echere m na isiokwu ịghọta ndụ na ọdịnala ndị Japan bụ "mmekọrịta". Yabụ, ọ ga-amasị m ịchikota ndụ na ọdịbendị ndị Japan na elere "nkwekọ" na saịtị a. "Harmony" nke dabere na ndụ ndị Japan na ọdịbendị Kedu onyogho ị nwere banyere Japan? Site na ụfọdụ ndị, Japan yiri ka ọ bụ mba siri ike nghọta. Japan nwere ike ịbụ "Galapagos" n'echiche. N’otu agwaetiti na-abụghị kọntinent ahụ, a zụlitewo obibi na ọdịbendị pụrụ iche. Mgbe ha rutere Japan, ọ na-eju ọtụtụ ndị anya na ndụ na ọdịbendị nke mepụtara dịka Galapagos. Ọ bụ ezie na nnukwu obodo ndị dị ka Tokyo na Osaka na-etolite, ọdịdị dị mma nke oge anọ a na-anabata ndị ọbịa. Omenala ndị dịka arụ arụ, sumo na kabuki ka dị, mana omenaala ọhụụ dịka animation, cosplay, robots, wdg. Mba ebe ihe niile na-emegiderịta onwe ha na-emetụta. Nke ahụ bụ Japan. Ọ bụrụ na ị pịa oyiyi dị n'okpuru ebe a, a ga-ewetara gị ụwa nke nkwekọrịta jikọtara ọnụ nke ndị Japan. Edebela m peeji dị iche iche, biko gaa ọtụtụ peeji, kporie ndụ. Ndakọrịta na Nature Harmon na Ọdịnala Ndị Mmadụ Oge nke oge a tụrụ aro ka vidiyo ndị na-ewebata ndụ na ọdịnala ndị Japan masịrị m na ị gụrụ ruo na njedebe. Laghachi na Home Banyere m Bon KUROSAWA Ogologo oge m rụrụ ọrụ dịka onye isi nchịkọta akụkọ maka Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) ma na-arụ ọrụ ugbu a dị ka onye edemede weebụ nwere onwe ya. Na NIKKEI, abụ m ...
20 Ihe kacha mma ime na Japan na etu esi eme ndoputa
Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịnụ ụtọ na njem gị na Japan. N'ime ha, olee ụdị ihe ị bu n'obi iji wuo atụmatụ njem gị? Na ibe a, m depụtara ihe ị ga-anụrịrị na Japan. Biko pịa oyuyo nke ihe ichoro ma nweta nkowa zuru ezu. Ihe omuma maka ntinye akwukwo tiketi na njem nleta ndi njem nleta nke ndi Japan na-eyi kimono, uwe ndi mba nke Japan na-ejeghari na temple Sensoji ụlọukwu a ma ama na Tokyo, Japan = shutterstock Tupu ịkọwa ihe ị kwesịrị ịnụ ụtọ na Japan, biko mara otu ihe ọmụma dị mkpa iji mee njem gị dị ebube. Nke ahụ bụ otu esi ede akwụkwọ tiketi na njegharị dị iche iche. Ana m ewebata isi okwu a n'isiokwu na-esonụ, biko biko daa ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị. 20 Ihe kachasị mma ị nwere ike ịnụ ụtọ na njem gị na Japan Mgbe ahụ, n'okpuru, m ga-edepụta ihe iri abụọ m kwadoro gị. Ọ bụrụ na ịpị na onyonyo ọ bụla, ị nwere ike ịkwaga na edemede kwekọrọ. Japanese Foods ppingzụ ahịa Snow Ebe Cherry Okooko Osisi Ifuru Twomụ agbọghọ abụọ ndị Japan na-anọdụ ala n'elu kapeeti uhie iji hụ ma nwee ọ Autụ n'oge mgbụsị akwụkwọ mara mma nke ogige Japanese na ụlọ nsọ Enkoji, Kyoto, Japan. Nke a bụ Rinzai Zen Sect na ama ama n'oge ọdịda = = shutterstock Mgbụsị akwụkwọ doo Japanese gardens Onsen (Hot Spring) Animals and fish Hiking Cosplayer as characters in Japan cosplay festival .Cosplayers often interact to create a subculture, and a broader use of the word " cosplay ", Osaka, Japan = shutterstock Ntụrụndụ Parks na Okwu Parks Ememme ...
Ebe kacha mma ndị njem na Japan! udu mmiri, oge opupu ihe ubi, na udu mmiri, na udu mmiri
Na saịtị a, enwere m peeji nke ịmebata n'otu n'otu n'akụkụ dị iche iche nke Japan. Can nwere ike ịga na ibe site na ịlele menu na ịpị aha ị nwere mmasị na ya. Agbanyeghị, edepụtara m ibe ndị a n'okpuru. Lelee ihe ndị na-esonụ ma ọ bụrụ na enwere ibe nke mmasị gị, biko pịa ya wee gaa na ibe ahụ. Ebe ọ bụ na Japan bụ obodo sara mbara nke ugwu na ndịda, Hokkaido dị na north na Kyushu na Okinawa dị na ndịda dị ezigbo iche. Enwere m olileanya na ị ga-ahụ Japan kachasị amasị m na saịtị m. 10 Itzọ njegharị kachasị mma: Ebee ka ịchọrọ ịga? Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ileba anya ụdị ụdị ebe nlegharị anya dị na Japan, biko gụọ peeji na-esonụ. Ebe kachasị mma mgbe ị na-ejegharị na Japan Ebe kachasị ewu ewu na Japan bụ ihe ndị a. Lee anya na slide onyonyo pịa ebe ọ bụla masịrị gị. Ederede ndị a metụtara site na mpaghara. Hokkaido Na-atụ aro ebe Sapporo Hakodate Furano / Biei Tohoku mpaghara (Northeast nke Honshu) Ebe a tụrụ aro ka Sendai (Miyagi Prefecture) Towada, Oirase (Aomori Prefecture) Aizuwakamatsu (Fukushima prefecture) Mpaghara Kanto (Gburugburu Tokyo Hak Kwadoro Akara) (Kanagawa Prefecture) Chubu Region (Central Honshu) Kwadoro maka ebe ugwu Fuji (Yamanashi, Shizuoka Prefecture) Shirakawago (Gifu Prefecture) Kanazawa (Ishikawa Prefecture) Kansai mpaghara (Gburugburu Kyoto na Osaka) Kwadoro ebe Kyoto (Kyoto Prefecture) Nara (Nara Prefecture) Osaka (Osaka Prefecture) Chugoku Region (Western Honshu) Kwadoro ebe Hiroshima (Hiroshima Prefecture) Miyajima (Hiroshima Prefecture) Matsue (Shimane ...
Esi ede ulo na Japan!
Onwere ndi mmadu nwere otutu ihe omume di egwu di iche. N’ezie, enwere m mmasị iji ebe ndobe ụlọ nkwari akụ na-atụnyere. Mgbe m tinyere akwụkwọ na họtel, m na-enyocha ya na ọtụtụ saịtị ntinye akwụkwọ ma debe ya na saịtị m kwenyesiri ike na ya. Maka m ụdị ntụrụndụ dị otú a, enwere m mmetụta na enwere ndị njem na-eji saịtị ndoputa nke enweghị m ike ịkwado ọtụtụ. Ya mere, aga m ewebata ihe banyere ndoputa nkwari akụ a na-akwadoro maka mmadụ niile site na ịme saịtị dị iche na "Best of Japan"Site ugbu a gaa n'ihu. Na ibe a, m ga-ewebata ụfọdụ saịtị ndoputa nkwari akụ m na-akwado. Maka nkọwa gbasara ụlọ obibi na Japan dịka ụlọ oriri na nkwari akụ, Ryokan, Minshuku biko lee ederede na-esote. Pịa na eserese ọ bụla, saịtị ntinye akwụkwọ ga-abụ gosiputara na ibe iche 2 Ebe nlele kacha mma maka ntinye akwụkwọ na Japan Enwere ọtụtụ saịtị ị nwere ike idobe ụlọ oriri na ọ hotelụ orụ ma ọ bụ Ryokan na Japan Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume. bụ 'saịtị atụnyere' ebe ị nwere ike ịtụle atụmatụ ebe obibi nke ọtụtụ saịtị ndobe nkwari akụ TripAdvisor TripAdvisor Ọ bụrụ na ịchọrọ ebe obibi nke dị gị mma na ụfọdụ obodo dịka Tokyo ma ọ bụ Kyoto, ana m akwado ka ị buru ụzọ nyochaa na TripAdvisor. saịtị a ma ama kacha mma. saịtị a nwere uru abụọ Nke mbụ, site na iji TripAdvisor, ị nwere ike ịnakọta ozi gbasara ụlọ nkwari akụ ndị kacha ewu ewu wdg na obodo ị ga-aga. Nke abuo, ị nwere ike ịchọta ebe obibi kachasị ọnụ atụmatụ odion ...
Ationgbọ njem na Japan! Ragbọ okporo ígwè Japan, Shinkansen, ọdụ ụgbọ elu wdg.
Mgbe ị na-ejegharị na Japan ị nwere ike ịkwaga nke ọma site na ijikọta shinkansen (Bullet train), ụgbọ elu, bọs, tagzi, ụgwọ ụgbọ ala wdg. Ọ bụrụ na ị gbakwunye njem Shinkansen na njem gị, ọ ga-abụ ebe nchekwa dị ụtọ. N'okwu ahụ, ịzụta "Japan Rail Pass" ga-abụ ihe ezi uche dị na ya. Na ibe a, m ga-ewebata nyocha ha. Ibe a toro ogologo. Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ "show" na ihe ọ bụla, a ga-egosipụta ọdịnaya zuru ezu zuru ezu. biko jiri tebụl ọdịnaya ahụ rite uru. Nwere ike ịlaghachi n'elu site na ịpị bọtịnụ akụ na ala aka nri nke ibe a. Japan Rail Pass Weebụsaịtị gọọmentị nke "Japan Rail Pass". Pịa ya ma gosipụta ya na ibe dị iche Clickpị oyiyi ahụ ga-egosipụta maapụ a na webụsaịtị gọọmentị nke Japan Rail Pass na ibe dị iche Banyere Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem n'ime Japan na-eji ụgbọ oloko JR dị ka Shinkansen, ị nwere ike ịchọrọ ịzụta "Japan Rail Pass" tupu ọpụpụ. Japan Rail Pass (nke a na-akpọkwa JR Pass) bụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè JR dị oke ọnụ na-enye maka ndị njem nleta si mba ọzọ. Can nwere ike nọkwasi ọtụtụ na JR 's Shinkansen na mgbe awara awara wdg wdg nke Japan Rail Pass bụ, dịka ọmụmaatụ, yen 33,000 kwa onye (ụbọchị 7, cardị ụgbọ ala nkịtị). Na Japan, ọ na-ewe ihe dịka 28,000 yen maka otu onye iji laghachi na azụ n'etiti Tokyo na Osaka na Shinkansen. Ọ bụrụ n ’iji ọtụtụ JR, Japan Rail Pass ga-abụ“ enyi ”gị dị ike. N'okpuru ebe a bụ ...
Ka m webata ụfọdụ ihe na saịtị a.
Onwere ndi mmadu nwere otutu ihe omume di egwu di iche. N’ezie, enwere m mmasị iji ebe ndobe ụlọ nkwari akụ na-atụnyere. Mgbe m tinyere akwụkwọ na họtel, m na-enyocha ya na ọtụtụ saịtị ntinye akwụkwọ ma debe ya na saịtị m kwenyesiri ike na ya. Maka m ụdị ihe ntụrụndụ a, enwere m mmetụta na enwere ndị njem nleta ...
Etu esi ede ma zụta tiketi na njegharị na Japan! Sumo, Baseball, Concert, ihe omume ...
Ọ bụrụ na isonye na njegharị na-emekọ ihe na nnukwu otu, gị na ndị enyi gị ma ọ bụ ezinaụlọ gị na Japan ga-aga n'efu, kedu etu ị ga-esi de akwụkwọ ma zụta tiketi maka asọmpi egwuregwu na egwu. Ma ọ bụ otu esi etinye akwụkwọ maka njegharị dịka ọrụ? Enwere saịtị ntinye akwụkwọ ...
Mgbe ị na-eme njem na Japan ị nwere ike ịkwaga nke ọma site na ijikọ shinkansen (Bullet train), ụgbọ elu, bọs, taxi, ụgwọ ụgbọ ala wdg. Ọ bụrụ na ịgbakwunye njem Shinkansen na njem gị, ọ ga-abụ ebe nchekwa dị mma. N'okwu ahụ, ịzụta "Japan Rail Pass" ga-abụ ihe ezi uche dị na ya. Na ibe a, a ga m…
Isiokwu ndị a tụrụ aro / ebe ị na-atụ aro
Na saịtị a, enwere m akwụkwọ m ewebata iche iche na akụkụ dị iche iche nke Japan. Nwere ike ịga na peeji ndị ahụ site na ilele menu na ịpị aha ndị masịrị gị. Agbanyeghị, edepụtara m peeji ndị a n'okpuru. Lee ihe ndia ma oburu na ibe adi ...
Ihe kachasị mma ime na Tokyo: Asakusa, Ginza, Shinjuku, Shibuya, Disney wdg.
Tokyo bụ isi obodo Japan. N'agbanyeghị na ọdịnala ọdịnala ka dị, e mepụtara ọhụụ. Biko bia bia lee Tokyo ma hu ike. Na ibe a, m ga-ewebata ebe ndị njem na ebe nlegharị anya na-ewu ewu karịsịa na Tokyo. Ibe akwukwo a di ogologo. Ọ bụrụ n’ị gụọ peeji a,…
Kyoto! 26 Ebe nkiri kacha mma: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji wdg.
Kyoto bụ obodo mara mma nke na-eketa ọdịnala ndị Japan. Ọ bụrụ na ị na-aga Kyoto, ị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịnala ndị Japan na ọdịnaya gị. Na ibe a, m ga-ewebata ihe nlere anya njem nleta nke a kacha akwadoro na Kyoto. Ibe akwukwo a di ogologo, ma oburu igu akwukwo a ka…
Edemede / Akwukwo Etu Tụrụ aro
Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịnụ ụtọ njem gị na Japan. N’ime ha, olee ụdị ihe i bu n’obi imebe atụmatụ njem gị? Na ibe a, edepụtara m ihe ị nwere ike ịnụ ụtọ na Japan. Biko pịa na foto nke ihe ị nwere mmasị na…
12 Ebe kacha mma Snow na Japan: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo snow…
Na ibe a, m ga-achọ ịkọwa banyere ihe ịtụnanya snow na Japan. Enwere ọtụtụ ebe snoo dị na Japan, yabụ ọ siri ike ikpebi ebe kachasị mma Ebe Ndị Atụrụ Isi bara. Na ibe a, achịkọtara m ebe kachasị mma, tumadi n'ebe ndị a ma ama n'etiti ndị ọbịa si mba ọzọ. M ga-eso ya ...
Kachasị Mma Ifuru Mkpụrụ Ọkọ na Oge na Japan! Hirosaki Castle, Mt.Yoshino ...
Na ibe a, m ga-ewebata ebe nlegharị anya na okooko osisi cherry mara mma. Ebe ọ bụ na ndị Japan na-akụ okooko osisi cherry ebe a na ebe ahụ, ọ na-esiri ike ikpebi mpaghara kachasị mma. Na ibe a, m ga-ewebata gị ebe ndị njem si mba ọzọ nwere ike ịnụ ụtọ mmụọ Japan na okooko osisi cherry. ...
Ihe omuma 11 nke ima mara tupu iga njem na Japan
Creaturesmụ anụmanụ ndị Japan na-apụta na ihe ngosi a ga - ezitere gị ozi bara uru!
Kedu mgbe kacha mma ileta Japan?
Kedu mgbe bụ oge kachasị mma maka afọ iji gaa Japan? Azịza ya dabere na nzube gị maka njem. Ikekwe ịchọrọ ịhụ okooko osisi cherry a ma ama na Japan? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, ana m akwado ịbịa Japan n'oge ọnwa Eprel. Eleghị anya ị chọrọ ịhụ ọmarịcha ihu igwe snowy? Gbalịa ileta Hokkaido, Tohoku ma ọ bụ Nagano site na Jenụwarị ruo Febụwarị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnụ ụtọ akwụkwọ osisi ụbịa, ọnwa Nọvemba kacha mma. Ọ bụrụ n ’ị ga - ahụ akwụkwọ osisi udu mmiri na Hokkaido, ọnwa Ọktoba kacha mma. Isiokwu a na-egosipụta oge ọ bụla kachasị mma atụmatụ. Mmiri - Machị, Eprel, Mee: Oge nke okooko osisi mara mma Mt. Fuji, Japan = Adobe Stock Nemophila na Hitachi Seaside Park, Ibaraki, Japan Oge opupu ihe ubi na Japan bụ n'ọnwa Machị, Eprel na Mee. Ikpeazụ 3 izu nke March nakwa dị ka ndị mbụ 3 izu nke April bụ ezigbo oge maka njem na opupu. Mụ akwụkwọ na-agụsị akwụkwọ afọ agụmakwụkwọ ma ndị okenye na-arụ ọrụ ka nọ n'ọrụ. Afọ ụlọ akwụkwọ ndị Japan na-amalite n'April ma gwụchaa afọ na-eso ya na March. Osisi Cherry na-eto eto n'oge izu abụọ n'agbata afọ akwụkwọ. Dabere na ebe ị gara na Japan, ị ga-enwe ike ịchọta ememme okooko osisi cherry ịga. Oge opupu ihe ubi dị mma n'oge ehihie mana abalị nwere ike ịdị oyi n'oge ọkọchị-June, July, August: Hokkaido na ememme ọkọchị na-atụ aro ubi ifuru na-acha odo odo na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ na Shikisai-no-oka, Biei, Hokkaido, .. .
Asusu! Ihe atọ ị ga-echeta mgbe ị na-agwa ndị Japan okwu
Ọtụtụ ndị Japan amachaghị asụ Bekee. N'ihi nke a, ndị bịara Japan enweghị ike iso ndị Japan nwee ezigbo nkwurịta okwu. Ndị mba ọzọ na-eche mgbe ụfọdụ ka esi ajụ onye ọ bụla maka enyemaka mgbe ha furu efu ma ọ bụ chọọ ozi. Mgbe ha ruru n’obere obodo ma ọ bụ n’obodo nta, ha enweghị ike iso ndị nọ n’ụlọ nri ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ kwurịta okwu. Na Japan, Kedu ihe ị ga - eme iji soro ndị Japan kwukọrịta? Ekwadoro m ihe atọ ndị a. Ka anyị kwuo "Sumimasen" Mgbe izizi ị gwara onye Japan okwu ị maghị, ị kwesịrị ibu ụzọ jiri ahịrịokwu Japanese na-esonụ. "Sumimasen" Nke a nwere ihe yiri nke a "Chere m" ma ọ bụ "Ndo (inye gị nsogbu)" na Bekee. Na Japanese, a na-eji okwu a eme ihe mgbe mgbe. “Sumimasen” nwekwara ike-eji dị ka "i meela" ma ọ bụ jiri na-akpọ maka enyemaka na a ahịa ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. Nkebi ahịrịokwu a bara ezigbo uru mgbe ịchọrọ ịdọta uche mmadụ. N’ozuzu, ndị si Japan amaghị asụ Bekee. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị gwa “Sumimasen” onye Japan, ha ga-akwụsị ma gee ntị n’ihe ị ga-ekwu. Ndị Japan nwere obiọma ma nabata ndị ala ọzọ biko biko nweere onwe gị iji "Sumimasen" ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka. Echefula ikele mmadụ maka ige gị ntị. Echegbula. Ndị Japan ghọtara otu esi ekwu "I meela" na Bekee ka ha wee ghọta ekele gị. Dee akwụkwọ ozi na akwụkwọ Japanese na-eme ihere, mana mgbe ị nọ na nsogbu, anyị ga-enyere gị aka. = Ntughari ...
Ego Japanese Otu esi agbanwe ego na otu esi akwụ ya
Ego na Japan bu Yen. Peeji a nwere nke kacha ọhụrụ na ọnụego mgbanwe biko biko zoo aka ebe a tupu ịgbanwere ego. N'ebe a, ị ga-ahụkwa ozi gbasara ego na mkpụrụ ego ndị Japan. Na mgbakwunye, Aga m akọwa ọnọdụ dị ugbu a maka iji kaadị kredit na Japan. Ndepụta ọnụego mgbanwe: Currey / Japan, wdg. Ego ole bụ 1 yen na ego mba gị? Isi mmalite: www.exchange-rates.org Ego ego Japanese na ego Points Banknotes na Japan = Adobe Stock Enwere ụdị ego anọ dị na Japan. Ihe edeturu ị ga - eji mee ihe nwere uru 1000 yen. 10,000 yen 5,000 yen 2,000 yen 1,000 yen ego na Japan = Adobe Stock Enwere ụdị mkpụrụ ego anọ na Japan. Atụ anya iji mkpụrụ ego yen 100 na yen 10 ọtụtụ mgbe. 500 yen 100 yen 50 yen 10 yen 5 yen 1 yen XNUMX yen a tụrụ aro ka vidiyo ndị metụtara ego Japan na Japankwụ ingwọ na Ihe Japan A ka nwere ọtụtụ ụlọ ahịa na-anabata naanị ego Na Japan, enwere ọtụtụ ụlọ ahịa na-anabata naanị ego. Maka ọtụtụ hotels, ngalaba ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa dị mma ị nwere ike iji kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị na obodo. Ọbụna ụfọdụ tagzi abịawo ịnara kaadị kredit n'oge na-adịbeghị anya. Ọtụtụ igwe mgbere na-azụ tiketi ụgbọ oloko nwere ike iji kredit kaadị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ nnabata n'ụlọ nsọ ma ọ bụ ebe nchụaja, ị ga-enwerịrị ego ọ bụla. Gbanwee ego gị na ọdụ ụgbọ elu Na Japan, ụlọ ahịa ole na ole na-anabata ego na-abụghị yen Japanese. Ya mere, ...
Na-atụ aro saịtị bara uru mgbe ị na-akwadebe maka njem gị na Japan
Na ibe a, m ga-ewebata weebụsaịtị dị iche iche metụtara Japan. M ga-emelite ozi a site n'oge ruo n'oge. Ọ ga-abụ ihe enyemaka maka gị iji kpokọta ozi. A na-achịkọta ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụgbọ njem, ụlọ nri, na ebe nrụọrụ weebụ metụtara ya n'ụzọ zuru ezu site na edemede. Ebe enwere njikọ na ala nke ibe a, biko gaa na peeji nke ịchọrọ ịhụ site n'ebe ahụ. Ebe ndị na-akụzi ọtụtụ ihe banyere Japan Japan National Tourism Organisation Japan National Tourism Organisation (JNTO) bụ windo metụtara njem na gọọmentị Japan. Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke JNTO nwere ọtụtụ ozi nlegharị anya maka Japan. Ozi a dị n’asụsụ iri na ise. Ọ bụrụ na enwere ọdachi ndị isi na Japan, weebụsaịtị a ga-eweta ozi dị mkpa maka ndị njem si mba ọzọ. >> Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke JNTO dị ebe a japan-guide.com japan-guide.com bụ weebụsaịtị a ma ama nke ndị ala ọzọ bi na Japan na-arụ ọrụ. O jirila nwayọ mụbaa ọnụ ọgụgụ ya kemgbe emepụtara websaịtị. Enwere ike ịsị na ọ bụ saịtị ozi ndị njem nleta maara nke ọma n'etiti ndị njem nleta na-abịa Japan ugbu a. N'oge opupu ihe ubi, ọ na-enye ozi gbasara otuto okooko osisi cherry na Japan. >> Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke japan-guide.com dị ebe a ZEKKEI Japan ZEKKEI Japan bụ ebe nrụọrụ weebụ ndị njem nleta na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ nwere isi ụlọ ọrụ na Ginza, Tokyo. Ọ na-enye edemede nke jiri onyogho mara mma ewebata mma ndị Japan na ndị mba ofesi. "ZEKKEI" pụtara "ebe kachasị mma mara mma" na Japanese. Dị ka ihe aha ya pụtara, ọ bụ ...
Kaadị SIM na Pota Wi-Fi mgbazinye na Japan! Ebe ka ịzụta na ịgbazite?
N’oge ịnọ na Japan, ị nwere ike chọọ iji ama. Kedu otu ị ga-esi nweta otu? Enwere nhọrọ isii enwere ike. Buru ụzọ, can nwere ike iji ọrụ ị na-agagharị na atụmatụ gị ugbu a mana biko jụọ ndị na-ahụ maka ọrụ gị maka ọnụego. Nke abụọ, ịnwere ike iji Wi-Fi na ekwentị gị ugbu a mgbe ị na-eme njem na Japan. Ọzọ ị nwere ike ịdenye aha na ụgwọ ọrụ Wi-Fi. Younwekwara ike iji kaadi SIM akwagoro ụgwọ nke nwere ike ịrụ ọrụ na Japan na ekwentị gị mepere emepe. You nwere ike iji ọrụ mgbazinye si obodo gị ma ọ bụ Japan iji nweta eriri ọkụ Wi-Fi, kaadi SIM ma ọ bụ ama nke nwere ike. N'ikpeazụ, ịnwere ike ịgbazite ekwentị na-enweghị isi n'ụlọ nkwari akụ gị. N'okpuru bụ ozi na nhọrọ nke ọ bụla iji nyere gị aka ikpebi. Kedu nhọrọ kachasị mma maka ojiji gị? Ozi kaadị SIM na ọdụ ụgbọ elu Kansai na Osaka Japan Ozi dị mkpa maka ịhọrọ ngwaọrụ maka njem gị bụ ndị a. Ọrụ mmegharị agagharị nke ga-adị ọnụ ala na mba ofesi ebidola. Ọ bụrụ na enwere ọrụ ịnya ụgbọ ala dị ọnụ site n'aka onye na-eweta gị ugbu a wee chee echiche iji ya. Rozọ Njikwa Wi-Fi Ọ bụrụ na gị na ndị ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị na-eme njem, ọ kacha mma iji eriri ebe Wi-Fi. Otu Wi-Fi rawụta otu gị nwere ike iji usentanetị nweta ihe karịrị otu smartphone n'otu oge. Y’oburu na inwe uzo abuo ma obu karie ma obu kariri gi ka anyi no na ibe gi ma ekewa unu…
Japan oge ugbu a! Oge ọdịiche site na mba gị
Naanị otu oge mpaghara na Japan. Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido, Sendai, Nagano, Hiroshima, Fukuoka, Kumamoto na Okinawa niile n'otu oge. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na enweghị oge nchekwa ụbọchị na Japan, ọ gaghị esiri gị ike ịmara oge Japan. Japan bụ ugbu a n'okpuru oge (Ọ bụrụ na oge egosighi, dobe cursor na akụkụ Japanese na map). Biko rụtụ aka na oge dị n’elu wee lelee oge dị iche na mpaghara ị bi na ya. Ọ bụrụ na obodo ahụ dị ogologo n’ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, enwere ọtụtụ mpaghara oge na mba ahụ, enwere oge dị iche. Ka o sina dị, Japan adịteghị aka n’ọwụwa anyanwụ na n’ebe ọdịda anyanwụ. Na Japan, ala ahụ gbatịrị ogologo na mgbago ugwu na n’ebe ndịda, mana n’ọwụwa anyanwụ na n’ọdịda anyanwụ, ọ naghị adị oke oge nke na ọ dị mkpa ịgbakwunye mpaghara oge ruo abụọ ma ọ bụ karịa. Oke bekee dị na ibe a bi na agwaetiti Ookuno na Takehara City, Hiroshima. Enwere ihe dị ka mmadụ 20 n’agwaetiti a, mana oke bekee 700 dị ebe ahụ. N’akwụkwọ “Alice’s Adventures in Wonderland”, oke bekee na-agba ọsọ ọsọ ọsọ mgbe ọ na-elele akpa ego. Ọ bụrụ na ị gaa n'àgwàetiti Oono, ị nwere ike izute oke bekee dị omimi. Enwere m ekele maka ị na-agụ na njedebe. Laghachi na "Fundamentals" Banyere m Bon KUROSAWA Ogologo oge m rụrụ ọrụ dịka onye isi nchịkọta akụkọ maka Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) ma na-arụ ọrụ ugbu a dị ka onye edemede weebụ nwere onwe ya. Na NIKKEI, ...
Ememe na Japan! Ndị ọbịa na-adọrọ adọrọ juru eju n'oge mgbụsị akwụkwọ mmeme nke oge opupu ihe ubi
Enwere ụbọchị ezumike 16 na Japan. Ọ bụrụ na ezumike ahụ dara na Sọnde, ụbọchị izu kachasị nso (na-abụkarị Monday) mgbe nke ahụ gasịrị ga-abụ ezumike. Ememe ndị Japan na-etinyekarị uche na izu site na njedebe nke Eprel ruo mmalite nke Mee. A na-akpọ izu a "Izu Ọma". Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ụbọchị site na etiti Septemba rue ngwụsị Septemba maka otu izu. A na-akpọ izu a "Izu Silver". Holidaylọ akwụkwọ ezumike bụ site na ngwụcha ọnwa Julaị ruo na Ọgọstụ. Biko rịba ama na n'oge ndị a, njem ndị njem na mba ahụ ga-ejupụta. Yearbọchị Afọ Ọhụrụ: 1stzọ Januarymá 29stbọchị Ọhụrụ nke Jenụwarị 20 na Meiji Jingu Shrine, Harajuku, Tokyo = Shutterstock Afọ Ọhụrụ bụ ezumike kachasị mkpa nye ndị Japan. Ọtụtụ mmadụ ga-ahapụ ezumike site na Disemba 11th ma soro ezinụlọ nọrọ oge n'ụbọchị Afọ Ọhụrụ. Ndị mmadụ na-aga n’ụlọ arụsị ma ọ bụ ụlọ arụsị iji kpee ekpere maka afọ ọhụrụ. Ọbịbịa nke ụbọchị: Mọnde nke abụọ nke Jenụwarị womenmụ nwanyị Japanese na-eyi uwe mkpuchi maka ọbịbịa nke afọ, iji mee ememme afọ ha gbanwere afọ iri abụọ = Shutterstock inmụ nwanyị nọ na kimono n'èzí ebe ọdịbendị n'oge emume Ememe Agebọchị Afọ na Kagoshima City, Japan = Shutterstock N’ụbọchị a, ndị Japan na-eme emume ndị gbara afọ iri abụọ. Ọtụtụ ọchịchị ime obodo na-asọpụrụ ha. Ndị na-eto eto na-eyi Kimono ma ọ bụ Suits na -eme ememe nke Ọgbọ. Foundationbọchị ntọala mba: February XNUMXth Ọ bụ ụbọchị iji mee ntọala nke Japan. Dabere na otu akụkọ mgbe ochie, Emperor Jinmu, eze ukwu mbụ, ...
Ihe Omume Kwa Afọ na Japan! Afọ Ọhụrụ, Hanami, Obon, Christmas na ndị ọzọ!
A ka nwere ọtụtụ ihe omume ọdịnala kwa afọ na Japan. Ọtụtụ ndị Japan na-ahọrọ ime ememme ndị a kwa afọ na ezinụlọ ha. N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ihe ndị njem si mba ọzọ emeela nke ọma. Site na otu n’ime ihe omume ndị a ị ga - enweta ezigbo echiche banyere omenaala ndị Japan. Isiokwu a kọwara ihe ndị a na-eme kwa afọ. Ememme Afọ Ọhụrụ nke Afọ Ọhụrụ bụ nke kachasị na Japan. Site na njedebe nke afọ ihe ndị na-esonụ na-eme kwa afọ. Joya no kane "Joya no kane" bụ emume a na-eme kwa afọ n'ụlọ arụsị Buddhist = Shutterstock "Joya no kane" bụ mmemme a na-eme kwa afọ n'ụlọ ụka Buddhist. N’etiti abalị na Disemba 31st ndị ụkọchukwu na-akụ nnukwu mgbịrịgba nke ụlọ nsọ ugboro 108. E nwere ihe dịka nchegbu 108 na-eche ụmụ mmadụ. Ihe kpatara ụda mgbịrịgba bụ iji chụpụ mmetụta ndị ahụ. Toshi-Koshi soba "Toshi-Koshi soba" bụ noodles na-erikarị na Disemba 31. Ndị Japan na-eri ogologo ahịhịa na-enwe olile anya na ha ga-ebi ndụ nwere isi. Hatsumode Otuowo nke Hatsumode na Asakusa na Tokyo, Japan. Hatsumode bu Shinto mbu ma obu Buddhist temple nke Japanese New Year = Shutterstock "Hatsumode" bu nleta izizi mmadu na aho na ulo uka. N’ime Afọ Ọhụrụ, ụlọ arụsị ọ bụla na ụlọ nsọ jupụtara na ọtụtụ mmadụ na-eme nleta ndị a. Setsubun "Setsubun" bu emume ndi Japan = Shutterstock "Setsubun" bu emume omenaala iji chupu ajo ihe. Ọ ga-eme na mbido ọnwa Febụwarị. Ndị mmadụ na-atụsa agwa n'ụlọ mgbe ha na-akụ "Oni-wa-soto, fuku-wa-uti," nke pụtara "Ọ ...
Ihu Igwe na Udiri-abia-Gi na Japan! Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido wdg.
Mgbe ị na-eme atụmatụ ịga leta Japan, olee otu ihu igwe na ihu igwe ga-adị? N’isiokwu a, ọ ga-amasị m iwebata ihu igwe na ihu igwe nke Japan yana atụmatụ mpaghara ọ bụla. Ihu igwe nke Japan di iche iche Japan bu nnukwu agwaetiti di ogologo nke gbaturu kilomita 3000 n’ebe ugwu na ndida. O nwere agwaetiti anọ buru ibu na ihe dịka obere agwaetiti 4. Ihu igwe dị nnọọ iche n’ebe ugwu Hokkaido na ndịda Okinawa. Oge oyi na Hokkaido dị ezigbo oyi, ebe Okinawa dị nwayọ ọbụlagodi n'oge oyi. Mpaghara ndị nwere nnukwu snow n'oge oyi bụ n'akụkụ Oké Osimiri Japan nke Hokkaido na Oké Osimiri Japan n'akụkụ ugwu nke Honshu. Data: Japan Meteorological Agency Japan Meteorological Agency Agency Japan Ọnọdụ ihu igwe: Snow na Japan Oké Osimiri Snow Fall na Japan = Shutterstock Dị ka azụ nke agwaetiti, ugwu ugwu na-agba ọsọ ogologo oge. N'ihi ugwu a, ihu igwe nke mpaghara Pacific nke agwaetiti Japan na akụkụ Oké Osimiri Japan dị nnọọ iche. N'oge oyi ọ bụla, n'akụkụ Oké Osimiri Japan nke mba ahụ, ọtụtụ igwe ojii na-ajụ mmiri site n'Oké Osimiri Japan na-adaba n'ugwu. N'ebe a, snow dara mgbe mgbe. Ka ọ dị ugbu a, n'akụkụ Pacific, ihu igwe doro anya ga-aga n'ihu n'oge oyi. Ọ bụrụ na ị gaa mpaghara ọdịda anyanwụ nke ugwu ugwu n'oge oge oyi, ọkachasị Hokkaido na ebe ugwu Honshu, ị ga-enwe ike ịhụ ihu igwe snowy. Oge mmiri ozuzo Japan: N'ihe dị ka ọnwa Juun Otu nwanyị nke kimono ọdịnala Japanese na-eje ije na-abịaru nso nke ejiri mma mmiri na-acha anụnụ anụnụ (macrophylla) chọọ ...
Ala Ọma Jijiji & Volcanos na Japan
Na Japan, ala ọma jijiji na - eme ugboro ugboro, site na obere ala ọma jijiji nke ahụ mmadụ na - ahụghị na nnukwu ọdachi. Ọtụtụ ndị Japan nwere mmetụta nke nsogbu amaghị amaghị mgbe ọdachi na-emere onwe ha ga-eme. N’ezie, enwere ike ịdakwasị nnukwu ọdachi na ala dị obere. Ọtụtụ ndị Japan ebiela ndụ karịa afọ 80. Kaosiladị, echiche a nke nsogbu nwere nnukwu mmetụta na mmụọ nke Japan. Cannotmụ mmadụ enweghị ike imeri ụwa. Ọtụtụ ndị Japan chere na ọ dị mkpa ibi ndụ kwekọrọ na okike. N’isiokwu a, m ga-atụle ala ọma jijiji ndị na-adịbeghị anya na mgbawa ugwu na-adịbeghị anya. Ala ọma jijiji na Japan Ọ bụrụ na ị nọrọ na Japan na afọ ole na ole, ị ga-enweta ma ọ dịkarịa ala otu ala ọma jijiji. Ezubere ụlọ Japan ka ọ ghara imebi ọ bụrụgodị na-enwe oke ala ọma jijiji. Ya mere, ekwesighi ịtụ egwu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nọrọ na Japan ruo ọtụtụ afọ, enwere ike ị nwere nnukwu ala ọma jijiji. N’afọ 2011, mgbe Oké Ala Ọwụwa Anyanwụ Japan mere, m na-arụ ọrụ n’ebe a na-eme skul na Tokyo ma hụ ụlọ ahụ na-ama jijiji. Oke oke ala ọma jijiji ọwụwa anyanwụ East East Japan nwere oke ala ọma jijiji, March 11, 2011 Nnukwu ala ọma jijiji nke East East (Higashi-Nihon Daishinsai) bụ nnukwu ala ọma jijiji nke dakwasịrị ugwu Honshu na March 11, 2011. Ihe karịrị 90% nke ihe dị ka mmadụ 15,000 metụtara nwụrụ n'ihi tsunami nke mere mgbe ala ọma jijiji mechara. Mgbe oke ala ọma jijiji ahụ mechara na 1995, a rụsiri ọrụ ike iji nweta ala ọma jijiji ...
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na oke ikuku ma ọ bụ ala ọma jijiji na Japan
Ọbụna na Japan, mbibi nke ajọ ifufe na oké mmiri ozuzo na-aba ụba n'ihi okpomọkụ ụwa. Ọzọkwa, ala ọma jijiji na-eme na Japan mgbe mgbe. Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na oke ikuku ma ọ bụ ala ọma jijiji mere mgbe ị na - eme njem na Japan? N'ezie, o yighị ka ị ga-ezute ụdị ikpe a. Agbanyeghị, ọ bụ ezigbo echiche ịmara ihe mgbochi ọ bụla na mberede. Yabụ, na ibe a, aga m atụle ihe m ga-eme mgbe ọdachi emere na Japan. Y’oburu na oke ikuku buru gi ma obu ala oma jijiji meru gi ugbua, budata ngwa ochichi nke Japan “Atụmatụ nchebe”. Zọ ahụ ị nweta ozi kachasị ọhụụ. Na agbanyeghị, gbaa mbọ nwee ebe nchekwa ị ga-agbaba. Gwa ndị Japan nọ gị nso okwu. Agbanyeghị, n'ozuzu ndị Japan adịghị mma ịsụ Bekee, ọ bụrụ na ị nọ na nsogbu ha ka chọrọ inye aka. Ọ bụrụ n’inwere ike iji kanji (mkpụrụedemede China), ị nwere ike isoro ha kparịta ụka otu a. Nweta ozi gbasara ihu igwe na ala ọma jijiji Tydị Ọdụ Oge Ọkụkụ ga-agbada ọdụ ụgbọ elu Okinawa = shutterstock Payaa ntị na amụma ihu igwe! Ndị njem si mba ofesi agwala m na "ndị Japan nwere ihu igwe." N'ezie, anyị na-enyocha amụma ihu igwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị. Nke a bụ n'ihi na ihu igwe ndị Japan na-agbanwe n'oge ọ bụla. Japan nwere mgbanwe oge nke oge yana oke ikuku na-abụkarị site n'oge mgbụsị akwụkwọ ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ọzọkwa, n’oge na-adịbeghị anya, mbibi sitere na oke mmiri ozuzo amụbawo n’ihi mmetụta nke okpomọkụ ụwa. Na mgbakwunye, ala ọma jijiji na mgbawa ugwu na-eme na Japan mgbe niile. Ọ bụrụ n’ị na -aga Japan, aga m…
Emperor nke Japan na Ọkọlọtọ Japanese
Mgbe ị na-eme njem na Japan ị nwere ike nwee ọ feelụ miri emi karị ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọmụma bụ isi nke akụkọ ntolite Japan. Peeji a gunye ichikota nkenke ndi eze di nkpa n’akuko Japanese. Na mgbakwunye, aga m etinye ozi gbasara ọkọlọtọ mba Japan. Emperor nke Japan Echiche nke Obí eze ukwu, Tokyo. Japan = Shutterstock Japan ejirila Emperor Emperor n'oge ochie. A na-akpọ eze ukwu “Tenno” na Japanese. Dabere na akụkọ mgbe ochie, eze izizi mbu bụ Emperor Jinmu. Ekwuru na Emperor Jinmu gbara okpueze na 660 BC mana ejighị n'aka. Ndochi nke oche eze abụrụla ihe nketa kemgbe ogologo oge. N'ime akwụkwọ iwu ochie ochie etubere na 1889, Emperor bụ eze. Kaosinadị, na Iwu ohuru nke ewepụtara na 1946, enyere ụmụ amaala ikike ịchị ya na Emperor ghọrọ “akara”. Taa, ezinụlọ ndị eze, nke hibere isi na Emperor, na-arụ ọrụ ihe atụ. Ọrụ a gụnyere ịga mmemme ụlọ na nke mba. Ezinụlọ eze na-ebu "Ippan Sanga" ugboro abụọ n'afọ iji kelee ọha na eze na Tokyo's Imperial Palace. Nke a na-eme na Jenụwarị 2 na Disemba 23. N'oge a, ọtụtụ mmadụ na-abịa n'obí nke Imperial iji hụtụ n'ezinụlọ ahụ n'onwe ya, Vidio akwadoro gbasara Emperor of Japan Flag Japanese Flag Flag Japan na-akpọ "Hinomaru ". A na-adọrọ otu okirikiri uhie na ndabere ọcha. Gburugburu uhie na-anọchi anya anyanwụ na-awa. Ndị Japan efewo anyanwụ ...
Foto: Rainbọchị mmiri na-ezo na Japan - Oge mmiri bụ June, Septemba na Machị
Foto: ụlọ nsọ Sensoji dị na Asakusa, Tokyo
Foto: Ime Anwansi nke Rurikoin Temple na Kyoto
October na Japan! Oge mgbụsị akwụkwọ na-amalite site na ugwu ugwu!
Foto: Japanese Bamboo Culture -Arashiyama Bamboo Forest, wdg.
Foto: ụlọ nsọ Daitokuji dị na Kyoto –towa nke Zen na Harmony with Nature
Foto: odlọ nsọ Kodaiji dị na Kyoto
Jenụwarị na Japan! Ka anyị nwee obi ụtọ n'oge oge oyi Japan!
Foto: Hanamiyama Park dị na Fukushima Prefecture
Hazie njem Mgbe aga (16) Ihe omume kalenda (15) Ihu igwe na Ihu Igwe (65) Usoro kacha mma (30) Ulo (3) Tiketi na njegharị (2) Ntughari (11) Uwe (6) asụsụ (1) Ego (1) Oge Ọdịiche (1) Intanet (1) Mgbapu (3) Mụta (83) Ndụ na Omenala (71) Akụkọ (4) Saịtị njikọta (7)
Mpaghara niile Hokkaido (62) Honshu: Tohoku (47) Mpaghara Aomori (9) Akita Prefecture (11) Iwate Prefecture (5) Mpaghara Miyagi (5) Amgbè Yamagata (5) Fukushima Prefecture (8) Honshu: Kanto (81) Tokyo (31) Obodo Tokyo (5) Kanagawa Prefecture (8) Chiba Prefecture (4) Saitama Prefecture (3) Baragbè Ibaraki (8) Obodo Gunma (6) Tochigi Prefecture (7) Honshu: Chubu (66) Shizuoka Prefecture (6) Obodo Yamanashi (11) Ogige Nagano (15) Nigata Prefecture (4) Yagbè Toyama (7) Ishikawa Onye Isi (7) Fukui Prefecture (4) Gifu Prefecture (13) Mpaghara Aichi (3) Mie Prefecture (5) Honshu: Kansai (78) Onye Shiga (6) Kyoto (33) Mpaghara Kyoto (2) Nara Prefecture (6) Wakayama Prefecture (4) Osaka (7) Osaka Prefecture (4) Mpaghara Hyogo (8) Honshu: Chugoku (33) Okayama Prefecture (6) Mpaghara Hiroshima (11) Ogige Yamaguchi (2) Obodo Tottori (4) Shimane Prefecture (8) Shikoku (17) Ogige Tokushima (5) Kagawa Prefecture (4) Ahime Prefecture (3) Obodo Kochi (1) Kyushu (37) Fukuoka Prefecture (5) Ogige Saga (1) Ogige Nagasaki (7) Mpaghara Kumamoto (8) Obodo Oita (8) Miyazaki Prefecture (3) Kagoshima Prefecture (3) Okinawa Prefecture (13)
Mmasị niile Tiketi na njegharị (2) Ekike (8) Zụ ahịa (14) Nri ndị Japan (15) Ebe Snow (77) Osisi Cherry (34) Ifuru (32) Ogige ndị Japan (16) Oge mgbụsị akwụkwọ (54) Onsen (22) Immụ anụmanụ na azụ̀ (10) Ikgagharị (67) Ihe ngosi ebe nkiri (29) Ogige ntụrụndụ (6) Echiche Abụọ na Ihe Ọmụma (39) Ememme (23) Pleslọ arụsị na rinlọ Nsọ (51) Lọ (33) Saịtị akụkọ ihe mere eme (59) Samurai & Ninja (14) Omenala omenka (5) Lọ ngosi ihe mgbe ochie (8) Manga & Anime (7) Osimiri (11) Egwuregwu (14) Lọ ọrụ na Azụmaahịa (8) Gbọ njem (12)
All n'Oge Oge oyi (52) Disemba (18) Jenụwarị (15) Febụwarị (18) Mmiri (47) Mee (13) Machị (12) Eprel (17) Ezumike (37) June (12) Julaị (16) Ọgọst (15) Mgbụsị akwụkwọ (47) Septemba (16) Ọktọba (16) Nọvemba (17)
Ngwurugwu ewu ewu
All Tags Abashiri (1) Aizu-Wakamatsu (2) Akihabara (4) Akpo (3) Arashiyama (4) Esaiduma Zoo (1) Asakusa (3) Ogige osisi Ashikaga (3) Aso (5) Beppu (6) Biei (19) Templelọ Chusonji (3) Daisetsuzan (5) Dotonbori (1) Edo-Tokyo Museum (2) Eikando Zenrinji Temple (4) Obinna (3) Fuji-Q Ugwu (2) Fukuoka (3) Furano (17) Ebe nchekwa Fushimi Inari-taisha (4) Ginza (3) Obinna Nwankpa (4) Gion (1) Ndota (16) Hakone (4) Hakone Open-Air Museum (1) Hakuba (6) Islọ Asịrị (1) Lọ nke Himeji (4) Rolọ Ncheta Ememe Ncheta Hiroshima (4) Ogige Oke Osimiri Hitachi (4) Huis iri Bosch (1) Obí eze ukwu (2) Nnukwu Shrine (2) Shlọ Ise (1) Izugbe Taisha (5) Jigokudani Snow Monkey Park (3) Kaiyukan (1) Kakunodate (5) Kamakura (6) Kamikochi (5) Kanazawa (5) Ubi Kenrokuen (6) Lọ Kinkakuji (4) Yolọ Kiyomizudera (7) Kobe (3) Koyasan (4) Obodo Kumamoto (2) Kumano Kodo (4) Ọdọ Mmiri Kawaguchiko (2) Castlọ Matsumoto (4) Ebe Shinji-jingu (4) Miyajima (10) Ugwu Fuji (13) Ugwu Takao (3) Ugwu Mt. Kelechi (4) Nabana no Sato (3) Nagasaki (3) Nara Park (4) Nikko (1) Nikko Tosho-gu (4) Niseko (7) Odaiba (2) Osimiri Oirase (3) Okinawa (9) Obodo Osaka (3) Otaru (14) Oze (4) Agwaetiti Sakurajima (2) Sapporo (22) Sendai (3) Lọ Sensoji (3) Shibuya (2) Shinjuku (4) Shinjuku Gyoen National Garden (2) Shirakawago (9) Shiretoko (14) Takachiho Gorge (3) Takayama (4) Atezọ Alpine Tateyama Kurobe (6) Lọ Todaiji (4) Ikenna Disney (1) National Museum nke Tokyo (2) Skyyo Skytree (3) Towerlọ Tokyo (3) Ueno (1) Ugwu (1) USJ (3) Yakushima (2) Yokohama (2) Yufuin (3) Kaị (5)
Biko pịa "Nyefee" mgbe ịhọrọ
Gaa na "foto"
Hokkaido! Gburugburu ebe ndị njem 21 ama ama na ọdụ ụgbọ elu iri
Hokkaido bụ agwaetiti nke abụọ kasị buo ibu na Japan mgbe a nwụsịrị Honshu. Ma ọ bụ mpaghara ugwu na ndị kasị ibu. Hokkaido dị oyi karịa agwaetiti ndị ọzọ na Japan. N'ihi na mmepe site na ndị Japan egbuola oge, enwere ọdịdị mara mma ma mara mma na Hokkaido. Na ibe a, aga m ewebata ihe ndeputa nke…
Ugwu Fuji: ntụpọ 15 dị mma na Japan!
Na ibe a, aga m egosi gị ụzọ kacha mma ị ga-esi lee Mt. Fuji. Mt. Fuji bu ugwu kacha elu na Japan na elu ugwu nke 3776. Enwere ọdọ mmiri ndị ọrụ ugwu na ugwu mgbawa mere. Fuji, na imepụta ala mara mma gburugburu ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ...
Onsen Japanese Onsen ka akwadoro maka ndị njem si mba ọzọ
N'ihi na Japan bụ obodo nwere ọtụtụ ugwu na-agbọpụ ọkụ, ọ bụ sọsọ ugwu ọkụ na-asọ asọ, sọks Onsen (Isi iyi dị ọkụ) ebe a. Ugbu a, a na-ekwu na enwere ihe karịrị ebe 3000 spa dị na Japan. N'ime ha, enwere ọtụtụ ebe ndị ama ama n'etiti ndị ọbịa si mba ọzọ. Na ...
12 Temlọ arụsị na ụlọ arụsị kacha mma na Japan! Fushimi inari, Kiyomizudera, Todaiji, wdg.
Enwere ọtụtụ ụlọ arụsị na ụlọ arụsị na Japan. Ọ bụrụ n’ị gaa ebe ndị ahụ, ị ​​ga-enwe obi iru ala ma nwetatụ ume. Enwere ụlọ arụsị mara mma na ụlọ nsọ mara mma ị ga-achọ biputere na Instagram gị. Na ibe a, ka m ewebata ufodu ulo nzuko a ma ama na…
Oge Japan! Ọdịbendị zụlitere n'ọgbanwe nke oge anọ
Enwere mgbanwe oge doro anya na Japan. Oge ọkọchị na-ekpo oke ọkụ, mana ọkụ anaghị adị ruo mgbe ebighi ebi. Ọnọdụ okpomọkụ na-eji nwayọọ nwayọọ daa, akwụkwọ ndị dị n'osisi ndị ahụ na-acha ọbara ọbara na odo. N’ikpeazụ, oge oyi siri ike ga-esochi. Ndị mmadụ na-eguzogide oyi ma na-eche ka oge opupu ihe ubi na-ekpo ọkụ bịa. Ihe a…
Nwepu © Best of Japan , 2022 Ikike niile echekwabara.